Dhaq dhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo Isku ababul dagaal oo laga soo sheegayo G/ Gedo – SBC
Dhaq dhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo Isku ababul dagaal oo laga soo sheegayo G/ Gedo
Posted by Webmaster on Aktoober 22, 2011 Comments
Deegaano ku dhow degmada Ceelwaaq ayaa wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jiraan dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo abaabulo dagaal oo ay wadaan ciidamada dowlada KMG ah ee Soomaaliya ee halkaasi ku sugan.
Sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanadaasi ku dhaqan waxaa labadii maalin ee ugu dambeysay halkaasi dhaq dhaqaaqyo ka waday ciidamada dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa dalka Kenya oo iyagu halkaasi dhowaan soo gaaray, waxaana muuqaneysa in ciidamadaaasi ay doonayaan in ay u talaabsadaan dhanka deegaanka Buusaar halkaas oo ay maamulaan xarakada mujaahidiinta Alshabaab.
Dhanka kale iyana waxaa dhaq dhaqaaqyo militeri halkaasi ka wada deegaanada ay ku suganyihiin xarakada Alshabaab, dhaq dhaqaaqyadaas oo ay ku doonayan in ay kaga hortagaan ciidamada labada dhinac ee u soo ruqaansaday dhanka degmada Buusaar.
Waxa ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha xarakada Alshabaab Almujaahidiin oo saxaafada la hadlay in dagaaladaasi ay kaga hortagi donaan ciidamada DKMG ah iyo Kuwa Kenya iyagoona ugu hanjabay in ay cashar lama ilaawaan ah u dhigi doonaan.
Wararka ku aadan dhaq dhaqaaqyadan oo ah kuwii ugu dambeeyay awid dhaq dhaqaaqyo ay sameeyaan labada dhinac ayaa waxaa ay ku soo aadayaan xili maalin nimadii shalay magaalada Baardheere ee gobolkaasi Gedo ay ka dheceen banaan baxyo loogaga soo horjeeday dhaq dhaqaaqyada ciidamada Kenya ay ka wadaan gobolka .
Sikastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan deegaanada looga casi qabo in ay dagaaladu ka dhacayaan ayaa sameynaya barakarc iyagoona casbi xoogan ka muujiyay in ay khasaarooyin u geystaan waxyaabaha ay isku adeegsanayaan labada dhinac ee dagaalamaya.